I-Australia ithumela amasosha eSolomon Islands ngemva kwezibhelu ezinodlame
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zaseSolomon Islands » I-Australia ithumela amasosha eSolomon Islands ngemva kwezibhelu ezinodlame
I-Australia Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ubugebengu • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Izindaba zaseSolomon Islands • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
UNdunankulu wase-Australia Scott Morrison umemezele ukuthi i-Australia ithumele amaphoyisa, namasosha ku Solomon Islands ngomzamo wokunqanda izibhelu ezinodlame.
Ngokusho Ungqongqoshe, Amaphoyisa angu-75 ase-Australian federal, amasosha angu-43 kanye namanxusa okungenani amahlanu alibangise eziqhingini "ukuze anikeze ukuzinza nokuvikeleka" futhi asize iziphathimandla zendawo ukuthi zigade ingqalasizinda ebalulekile.
Umsebenzi wabo kulindeleke ukuthi udonse amasonto ambalwa, futhi uza phakathi kwezinxushunxushu ezikhulayo, ababhikishi muva nje bezama ukugasela ephalamende likazwelonke.
Imibhikisho ixhumene nezinkinga eziningi zasekhaya - mhlawumbe enkulu phakathi kwazo kube yisinqumo sikahulumeni waseSolomon ngonyaka ka-2019 sokunqamula ubudlelwano bezokuxhumana neTaiwan ivune iChina, ebheka iTaiwan njengengxenye yendawo yayo.
Morrison wagcizelela ukuthi “akuyona inhloso kahulumeni wase-Australia nganoma iyiphi indlela ukungenelela ezindabeni zangaphakathi Solomon Islands,” enezela ukuthi ukuthunyelwa “akubonisi noma yikuphi ukuma ezindabeni zangaphakathi” zesizwe.
Undunankulu walezi ziqhingi, uManasseh Sogavare, umemezele ukuvalwa kwezindawo amahora angama-36 ngoLwesithathu kulandela umbhikisho omkhulu enhlokodolobha iHoniara, lapho ababhikishi befuna ehle esikhundleni. Kwesinye isikhathi ababhikishi bake bazama nokugasela ebhilidini lephalamende, kwathi ngokuhamba kwesikhathi bathungela iqhugwane eliseduze nesishayamthetho.
Izitolo nezinye izakhiwo ezisesifundeni saseChinatown zedolobha nazo zaphangwa zashiswa, naphezu kwemithetho eqhubekayo yokuvalwa kwezindlu kanye nezikhathi zokufika ekhaya. Ukucekelwa phansi kuthathwe ezithombeni ezihamba ku-inthanethi, izakhiwo ezilimele nezishunqayo zibonakala phakathi kolwandle lwemfucumfucu.
NgoLwesihlanu, njengoba izisebenzi zase-Australia zifika, uNdunankulu wagcizelela imibhikisho emazweni angaphandle angashiwongo, ethi ababhikishi "badliwe ngamanga namanga ngamabomu" ngobudlelwano beziqhingi neBeijing.
"Wona kanye lawa mazwe anomthelela [ababhikishi] amazwe angafuni ubudlelwano nePeople's Republic of China, futhi awakhuthazi iSolomon Islands ukuthi ingene ebudlelwaneni bezobuzwe," kusho uSogavare, nakuba enqabile ukusho noma yimaphi. isizwe esithile.